सुन्दर अनुहारले आत्मविश्वास बढाउने « Tuwachung.com
६. मंगलटार हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकै सम्पन्न वडा
७. ५० तस्बिरमा बुङालुङ (रकगार्डेन)
८. सोल्टिनीले धोका दिएपछि १८ वर्ष ब्रिटिस आर्मीमा
१२. खलनायकको भूमिकामा प्रतिष्ठित व्यक्तिको संलग्नता
सिडियो कुट्ने लाहुरे
मनीषा राई	२०७७ श्रावण २१, २०:२०
अनुहारले व्यक्तित्व झल्काउँछ । अनुहार सुन्दर छ भने सम्बन्धित व्यक्तिको आत्मविश्वास बढ्छ । आफू सुन्दर देखिन मानिसको पहिलो रोजाइमा पर्छ । हिजोआज सहर–बजार होस् या गाउँघरका मानिस । मानिस सुन्दरताप्रति त्यत्तिकै सजक र सचेत छन् । सुन्दर देखिन भद्दा मेकअप गर्न आवश्यक छैन । सामान्य र आफूलाई सुहाउँदो मेकअपले पनि उसको सौन्दर्यमा निखार ल्याउँछ ।
मेकअप गर्दा आफ्नो ‘स्किन टोन’अनुसारको ‘व्युटी प्रडक्ट’ छनोट गर्न अति आवश्यक छ । अनुहारको समस्याका रूपमा देखिने ‘पिम्पल’ अथवा डन्डिफोर पनि एक हो । यसको समाधानार्थ घरेलु उपाय यस्ता छन् ।
ताजा फलफूल र हरियो सागसब्जी दिनहुँजसो खाने ।
दैनिक नियमित हल्का व्यायाम गर्ने ।
कम्तीमा दैनिक आठ/दस गिलास पानी पिउने ।
सकेसम्म चिन्ता नलिने ।
धेरै गुलियो, चिल्लो तथा मसलेदार खानेकुरा नखाने ।
आफ्नो छालाको सरसफाइ तथा स्याहार गर्ने ।
अनुहारमा आउने चिल्लोपन रोक्न कोसिस गर्ने ।
अनुहारको छिद्र बन्द गर्न ‘प्याक’ र ‘टोनर’ प्रयोग गर्ने ।
समयअनुसार मेकअप गर्न जरुरी हुन्छ ।
गर्मी मौसमको मेकअप
गर्मी मौसममा धेरै पसिना आउने भएकाले मेकअप गर्दा सचेत हुनुपर्छ । गर्मीमा यात्रामा निस्कँदा आफ्नो छाला र मेकअपलाई घाम तथा धूलोबाट जोगाउन सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि अनुहारमा सनक्रिम लोसन प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले छालालार्ई सूर्यको किरणबाट बचाउँछ । गर्मीमा सकेसम्म बाटरप्रुफ मेकअप गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । यो चाँडै बिग्रँदैन । लामो समयसम्म टिकिरहन्छ । प्रचण्ड घाममा बाहिर निस्कनु छ भने स्कार्फले टाउको छोप्नुपर्छ । छाता पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । आँखालाई धूलोबाट जोगाउन चस्मासमेत लगाउन सकिन्छ ।
जाडो मौसमको मेकअप
जाडो मौसममा छालाको हेरचाह गर्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । जाडोमा ‘ओयल बेस्ड मोस्चराइजर’ प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले छालालाई कुनै पनि क्रिम वा लोसन लगाउँदाभन्दा बढी नरम बनाउँछ । जाडोमा चिसो हावा चल्नाले छालामा चिल्लो पदार्थ कम हुन्छ । जसले छालामा सुख्खापन हुन्छ । त्यसबेला मनतातो पानीले अनुहार धोएर मोइस्चराइजरयुक्त क्रिम प्रयोग गर्नुपर्छ ।
साकेलाको सतर्कता : सामाजिक सुरक्षा–भत्ता सदुपयोगका लागि अभियान
खोटाङ । साकेला गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा–भत्ता वितरणमा हुँदै आएको अनियमितता रोक्न अभियान थालेको छ ।
खोटाङमा ३ विमानस्थल, ६ महिनापछि २ बाट नियमित उडान
खोटाङ । बन्दाबन्दीका कारण ६ महिनादेखि बन्द रहेको जिल्लाका तीनमध्ये दुई विमानस्थलमा आगामी शनिबारदेखि नियमित
सोलुखुम्बुको ‘हिमचितुवा’को काठमाडौंमा निधन
सोलुखुम्बु । विनाअक्सिजन दसपटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गरेका पर्वतारोही आङ्रिता शेर्पाको निधन
तुवाचुङ साप्ताहिकद्वारा ६ जनालाई ‘फुल स्करलसिप’
दुर्छिम (खोटाङ) । तुवाचुङ साप्ताहिक र कुमारीपाटी ललितपुरमा रहेको एड्भान्स एकेडेमीको सहकार्यमा ११ कक्षामा अध्ययन